Ukulinganiswa okuphezulu koThoba iipompu zeKhitshi kunye nokuTsala isitshizi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Iphezulu Ireyithi ephezulu yeArc Isiphatho Esingabanjwanga Iibhanti zeNickel zasekhitshini kunye nokuTsala isitshizi seSUS 304
I-WOWOW ephezulu ereyithiweyo ephezulu yeArc Isiphatho Esingabanjwanga seBhasikiti yeNickel ekhitshini ngeTsala isitshizi seSUS 304
Le faucet yekhitshi enesitshizi sokutshiza yenziwe ngobhedu oluphambili kunye nokuhlamba ukukhokelela. I-SUS304 inobuhlobo kwindalo kwaye isempilweni, kwaye impilo yethu ixhomekeke kumgcini wethu. Ingatshintshwa ngokujikeleza okushushu nokubandayo, kulula ukuyitshintsha, kulula ukuyifaka, iklasikhi nenhle, kwaye ilungele indawo yokuhombisa kunye nekhitshi eyahlukeneyo
Tsala phantsi ikhitshi lokutshiza ikhitshi 2310301
Ukukhetha i-faucet ekhitshini lasekhitshini, enye yezona zinto zibalulekileyo kukukhusela impilo kunye nokusingqongileyo. Indawo yokupheka ekhitshini engenziwanga ngezinto eziqinileyo nezisemgangathweni ophezulu, inokuchaphazela impilo yakho ngenxa yentsalela enobuthi edibanisa namanzi akho okusela. Ukudonsa phantsi ikhitshi lokutshisa i-favelts yeWOWOW zenziwa nge-nickel kunye nezixhobo ezikumgangatho ophezulu. Ngokudibanisa nezinto zensimbi ezingenanto, ezi zidonsa zitshitshisiweyo ekhitshini zinika elona xabiso lihle kakhulu ngokwemali ngomgangatho, ukuqina nokumelana. Isivalo esiphezulu sediski yodaka esemgangathweni yezi zinto zokucutha isitofu zekhitshi lokuhlala sinokuhlala ubuncinci singama-500,000 emijikelezo yamanzi yokutsala ngokupheleleyo. Oku kudlula nawuphi na umgangatho womzi-mveliso. Ngaphezulu kwayo yonke into, hlisa iikhitshi zasekhitshini zeWOWOW yonga amanzi ngenxa yentloko yayo yokutshiza. Ngokuqinisekileyo uya kuyiphawula le nto kwityala lakho lamanzi!
Ngaphandle kwempilo, ukusebenza kwezi zinto kukucutha iifestile zekhitshi lokuntywila ezahlukeneyo nazo. I-multi-functionalsprayer inokusetyenziswa ngeendlela ezimbini: umjelo onzima xa ugcwalisa ipani ngamanzi umzekelo, kunye nesitshizi esinzima sokucoca izitya umzekelo. Isikhenkcisi sokuphelisa isitya esinye ekhitshini senza kube lula ukuhlengahlengisa isixa kunye namaqondo obushushu amanzi. Ngakolunye uhlangothi, i-swivel spout inokujika i-degrees ezingama-360 zentuthuzelo ephezulu. Kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, isitofu sokuntywila esine-lever sibonisa imephu yokukhupha ye-1.5 m kukubonelela ngendawo enkulu yokuhlamba eyi-80 cm. Oku kuluncedo ngakumbi xa unesinki ekhitshini eliphindwe kabini, kodwa kunye nekhitshi enye yokutshisa ezi zitshizi zekhitshi zeWOWOW zinokubakho ziluncedo. Akukho ndawo ibenye ngaphakathi okanye ejikeleze ikhitshi lakho lasekhitshini alinakufikelelwa ngale mibhobho yesitshixo ekhitshini yeWOWOW.
Iitrayipi ezitshiweyo ekhitshini elisezantsi ekhitshini
Ngaphandle kwempilo kunye nokusebenza, ngokuqinisekileyo, ufuna isitayile sokudonsa ezantsi ekhitshini kunye. Indawo yokucheba ekhitshini kufuneka yenze ubumbano oluhlangeneyo kuyilo lwakho lonke ekhitshini. Abanye abantu bayayijongela phantsi ifuthe lasekhitshini ekhitshini. Xa umntu engena ekhitshini, ingqalelo yakhe inokutsalwa ngokuzenzekelayo kwimitya ekhitshini. Nangona izitshitshisi zasekhitshini zincinci kakhulu, zinempembelelo enkulu kubuhle bekhitshi lakho lilonke. Ngenxa yoko kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe ikhitshi lakho ekhitshini ngobulumko, njengoko linokunika ikhitshi lakho ukuphuculwa okuhle. Ezi zi-nickel ezirhuqwayo zadonsa ekhitshini le-dow echibini le-WOWOW ziya kukunika oku kuphakamisa ngaphandle kwamathandabuzo.
Tsala phantsi ikhitshi lokutshiza iikhitshi linika inzuzo enkulu ngaphezulu kwezinye iintlobo zekhitshi lokucoca ikhitshi. Ngenxa yokuphanziswa kwamanzi, unokuyandisa lula ifenki yakho ekhitshini. Ngale nto ilula, unokufikelela kuyo nayiphi na indawo ngaphakathi okanye kufutshane nekhitshi lakho. Kwaye okwangoku, i-hose idityaniswe ngokucocekileyo ekhitshini lekiti yokuntywila ekhitshini, ngenxa yoko awuyi kubona naziphi na iikhompawundi zamanzi xa ungasebenzisi ifekthi yakho yaphantsi ekhitshini. Imeko ekuphela kwayo kukuba neendlela ezikumgangatho ophezulu wokukhupha. Kuya kuba yinto engaguqukiyo ngokupheleleyo ukuba kufuneke kuncothule ii-faipits zekitshi zangaphakathi ekhitshini apho amanzi engakwazi ukubuyela kuye njengoko kufanelekile. Kuya kufuneka isebenze ngokufanelekileyo i-100% ukukunika intuthuzelo ephezulu.
Phucula ikhitshi lakho ngezi zinto zishenxayo ekhitshini lasekhitshini
Ukutsala iipompo zokuntywila zekhitshi ze-WOWOW zenza ubomi bakho bube lula. Uyilo lwebhola yomxhuzulane yeklasikhi yezi mpompo zitshini zenza kube mpuluswa ngokupheleleyo ukukhupha kunye nokubuyisa ithumbu lamanzi. Ibhola yomxhuzulane iphinda ibuyisele isitshizi ngokuzenzekelayo, ke awuzukuzikhandla ngokwakho xa ugqibile ukuhlamba isitya sakho ekhitshini. isitayile kunye nokusebenza. Njengoko sele kukhankanyiwe, iipompo zokuntywila ezitshini zeWOWOW zibonelela ngemisebenzi emi-2 yamanzi: ukusasaza kunye nokutshiza. Le misebenzi mibini ikuvumela ukuba uguqule ngokulula kunye ne-ergonomically ukusuka kutshizi ukuya kumjelo okanye ngokuchaseneyo. Unokwenza oku ngokuhamba ngomnwe ngokulula ngaphandle kokumisa amanzi kuqala. Iqhosha lihamba ngokutyibilikayo kwaye linika intuthuzelo ephezulu.
Ixabiso elifanelekileyo lokudonsa isitofu sokutshiza ekhitshini
Umgangatho uza ngexabiso, kodwa hayi kwi-WOWOW. I-WOWOW ifezekisile ukukubonelela ngeefesitesi zekhitshi ekumgangatho ophezulu ezisathengiweyo. Ngenxa yokufumana ngokukuko kwezinto kunye nokuvelisa okuzenzekelayo kunye nenkqubo yovavanyo, I-WOWOW iyakwazi ukukunikezela ngeefesitile zekhitshi ezitshisayo ezinokukhuphisana nayo nayiphi na ifektri yeshishini lase-A-brand ekhitshini, ukanti nje kwinxalenye yamaxabiso. Ke ngoko siyathemba ukuba awusayi kufumana naziphi na izixhobo zokutsala ekhitshini ngexabiso elingcono kuneWOWOW. Ngenxa yoko, i-WOWOW ikunika eyona yexabiso ulifumanayo kwintengiso.
Ngaphandle kwenjongo I-WOWOW inikezela isiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-90 kwidrophu yakhe yaphantsi ekhitshini. Xa ucinga ukuba ukuhambisa kwethu phantsi ikhitshi lesitshizi ayisiyiyo ubuyilindele, siya kukubuyisela ngaphandle kwengxaki okanye imibuzo ebuzwayo. Ilula njengale. Simele iimveliso zethu kwaye siqinisekile ukuba sinikezela nge-top-notch ukudonsa ikhitshi lokucoca ikhitshi. Ke ngoko siyayazi ukuba awuzukuphoxeka kwaye uya kumangaliswa ngokuqinisekileyo ngephedi yakho yokuntywila ekhitshini. Sinabathengi abaninzi ababuyayo kwihlabathi lonke, kwaye siqinisekile ukuba uza kusinyula ngexesha elizayo.
Ukufakwa ngokulula kuqinisekisiwe
Ukutsala phantsi kweefesitesi zekhitshi le-WOWOW kulula ukuyifaka ngenxa yokujongana kwayo ngokulula. Ungasifaka le faucet inyathelo elinye. Ke ngoko unokufaka iitephu ezitshiweyo ekhitshini ngokwakho. Akunyanzelekanga ukuba uqeshe uchwephesha obiza imali eninzi ukuze ukwazi ukugcina imali eninzi apha. Ikhitshi lokucoca ikhitshi le-WOWOW liza neeplate yomgangatho, ibhola yomxhuzulane, iiseti zamanzi ashushu nabandayo ashushu kunye neseti yezixhobo zokukhwela. Olu seto lugqibeleleyo luqinisekisa ukufakelwa okusebenzayo kunye nokukhawulezayo. Ilula ngolo hlobo!
Izibonelelo zokutsala phantsi i-faipits ekhitshini lasekhitshini ngesingezantsi:
● Inika nantoni na ekhitshini
● I-nickel ebrashiweyo
● Umgangatho ophezulu wokudonsa umbhobho wamanzi
● I-lever yesandla esisodwa ehlaziyayo
● Imisebenzi emibini yamanzi
● Yenziwe ngezinto zobhedu ezikumgangatho ophezulu
● Kulula ukuyicoca kwaye kulula ukuyigcina
● Isiqinisekiso seminyaka emi-5
I-SKU: 2310301 iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: Uqhekeze uNickel, Yehlisa, Iholide elilodwa
1 okanye 3 Hole Deck Mount
Ikhitshi / ngaphakathi / urhwebo / irestyu / Ikhaya / 1or2 isinki
Ikhitshi lombhobho wokuntywila; Ama-50cm Amanzi ashushu kunye naManzi abandayo; Tsala isitshizi; Ipleyiti yedesika; Izixhobo zokufaka